🎳 Ciyaaraha | Booqo Hultsfred
Ciyaaraha guriga ku ciyaar!
Gudaha iyo dibaddaba-Hultsfred waxay bixisaa nashaadyo isboorti oo nasasho leh iyo tacabur degdeg ah qoyska oo dhan.
Golf disc ama golf frisbee sida sidoo kale loogu yeero waa ciyaar lagu ciyaaro saxan (frisbee). Dhererka koorsadu waa 780 mitir, oo ka kooban 9 godad
Kubbadda Cagta ee Lönneberga
Ma waxaad jeceshahay waxqabad adrenaline ka buuxa? Isku day kubbadda rinjiga gudaha Lönneberga. Kubadda Rinjiga waa hawl aad u fiican adiga oo jecel adrenaline oo qof walba ku habboon
Dhaqdhaqaaq weyn oo nasasho leh oo waliba caqabad ku noqon kara. Ka bax harada ama webiga muraayadda-dhalaalaya. Si deggan u xaree!
Ku raaxayso dabaylo deggan iyo daqiiqad xasilloon oo ku taal biyaha Hulingen ee quruxda badan. Si aad si aamusnaan leh ugu dul dhaqaaqdo dusha biyaha, joogso meel xeeb ah mid
Padel waa ciyaar raket ah oo loo arki karo isku dhafka tennis-ka iyo squash. Waxa lagu ciyaaraa maxkamad laba qaybood oo ka mid ah maxkamaddu mid kala soocday
Hultsfreds Bowlinghall waxay leedahay wadar ahaan 8 koorso oo loogu talagalay labada madadaalo iyo tartamada labadaba. Carruurta waxaa jira dayrar la yiraahdo. bambooyin si ay isugu laabaan dhinacyada waddada
Jirdhiska dibadda ee Hagadal
Ka shaqee markasta oo aad rabto, had iyo jeer la heli karo oo bilaash ah inaad isticmaasho! Xidhiidhka tooska ah ee dabaasha iyo hoolka isboortiga ee Hagadal, waxaa ku yaal toban saldhig alwaax oo kala duwan.
Maxkamada kooxda Målilla
Iskeeytiga barafka waa waxqabad jiilaal oo caan ah! Halkaan waxaad ka amaahan kartaa iskeetka, koofiyada, kubbadda iyo naadiga. Waxaa jira meelo barbecue loogu talagalay kuwa raba inay wax dubtaan, ha ilaawin